Usehlwithwe iNkaba yezingqalabutho uFlorence | IOL Isolezwe
Usehlwithwe iNkaba yezingqalabutho uFlorence
Isolezwe / 9 July 2012, 2:51pm /
U FLORENCE Masebe osezobonakala elingisa kwi Nkaba umdlalo okhonjiswa ku Mzansi Magic
USEJOYINE umdlalo obophele izinkakha zosaziwayo okhonjiswa kuMzansi Magic phakathi nezinsuku ngo-8 ebusuku uFlorence Masebe.
Lo mlingisi ozodlala kwiNkaba useqalile ukushutha iziqephu zalo mdlalo kanti uzoqala ukubonakala kuwona ngo-Agasti 13 ngokukaBongi Potelwa okhulumela lo mdlalo.
“UFlorence Masebe uzolingisa indawo kaGloria owesifazane okhaliphile, osezingeni eliphezulu futhi onemali. UGloria odume iGoli lonke ungumngani weqiniso owazana noNomsa kudala besakhula,” kuchaza okhulumela lo mdalo.
UFlorence uthe ukuba ngomunye wabalingisa kulo mdlalo kuyisibusiso kakhulu kuyena njengoba uqukethe izingqalabutho emkhakheni wezokulingisa.
“Izinto zingihambela kahle kakhulu kulezi zinsuku okusho ukuthi uyabonakala umsebenzi wami njengoba sengibalwa nabalingisi balo mdlalo osenezinyanga ukhonjiswa kulo nyaka nobukeka sengathi izinga lawo lizokwenyuka ngesivinini ngenxa yabalingisi abasebenza ngokuzikhandla abadlala kuwona,” kuchaza lo mlingisi obezwakala ejabulile ngesikhathi ekhuluma nentatheli mayelana nokuqokelwa le ndawo azoyidlala.
Echaza ngezinye izinhlelo aphezu kwazo uthe umatasa neminye imidlalo azobonakala elingisa kuyona maduze okubalwa kuyo nefilimu yolimi lwesiVenda esihloko sithi i-Elelwani okungenye yamafilimu akhonjiswa kwi-Durban International Film Festival yalo nyaka.
UFlorence osanda kushiya umdlalo okhonjiswa ku-SABC 2 i-7de Delaan waqala ukugqama ngesikhathi elingisa emdlalweni owuchungechunge okhonjiswa ku-SABC 1 iGenerations.
Phakathi kweminye imidlalo aseke walingisa kuyo kubalwa iMuvhango ne-Soul City kanti izinhlelo aseke wazethula kubalwa iFokus ne-It For Life ku-SABC 2.